ဝါဝါဝင်းရွှေ သည် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု သုံးကြိမ် ရရှိခဲ့သော မြန်မာ အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်သည်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် စိတ် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို စတင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ သူမသည် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းရာကျော်တွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဇာတ်ကားပေါင်း ၅၀ ကျော်ကို ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ သူမသည် ချစ်သမီး (၁၉၆၅)၊ ချောင်းကိုပစ်၍ မြစ်ကိုရှာ (၁၉၇၉)နှင့် မိန်းကလေးရှင်ရဲ့ဆန္ဒ (၁၉၇၉) ဇာတ်ကားတို့ဖြင့် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုကို သုံးကြိမ်ရရှိခဲ့သည်။
ဝါဝါဝင်းရွှေသည် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သော သန်းထွဋ်နှင့် ၁၉၇၁ ခုနှစ်တွင် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ဝင်းထွဋ်ဝင်းနှင့် ဝါဇင်အမည်ရှိ သားနှစ်ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ သူမသည် ကိုးကန့်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သော အိုလစ်ဖ်ယန်းနှင့် ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Zon Pan Pwint 2013.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Yan Pai 2011.
↑ ၄.၀ ၄.၁ Zon Pann Pwint 2013.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဝါဝါဝင်းရွှေ&oldid=640666" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။